Barbardhig macmiilayaasha və ya 5 FTP ee WordPress'dir
Abuuritaanka veb-saytı və WordPress-in veb-saytı və Lego Legh.
Waxaad aragtaa waxa aad rabto inaad ku gueyeysato, qeexdo qaybaha lagama maarmaanka ah, oo ka dhig dhammaan wadajirta dhulka. Hase-yeeshe, caqabada koowaad, si kastaba ha ahaatee, mum walba ay ku habboon yihiin si siman iyo si aan kala go ‘lahayn.
Bu yazıda, FTP (Fayl Dəyişdirmə Protokolu) ilə əlaqə qurmaq və WordPress-ə müraciət etmək.
0.5 4. YanğınFTP
0.6 5. Qudbi 4
Isticmaalka Macaamiisha FTP və orta ka, orta və ya orta səviyyəli WordPress veb saytlarına daxil olmaq üçün istifadə edin. Tani waxay badanaa səbəbtoo ah nidaamyada maareynta maadooyinka waxay si aad ah u fuddeeyeen habka dhismaha.
Vaqtigii hore, horumariyaashu waxay ubaahanayeen macaamil FTP ah ay ay fayl faylanan faylasha shabakadahooda shabakadooda waxayna ka dhigi karaan inay isticmaalaan dadka isticmaala – ina ka helaan hantida muuqaalka ka ka kaka.
Maanta, dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso waa gundhig u sameynta jaangooyada WordPress, soado qaado mawduuc, oo aad abuurto nuxur adigoo adeegsanaya interfeysi uyğun deyil. Waxa kale oo ay fududahay in lagu dar farsamooyinka ya sii wado boggaaga adoo ka caininaya plaginləri, kaas oo si toos ah loogu rakibay bakhaarka rəssamlıq və ya WordPress.
Ilaa inta aad kashaqeyneyso koodhka oo aad hayso ilahaaga cusub, CMS waa inay awoodaan inay fuliyaan hawlahaas sida saacadaha shaqada. Laakiin haddii aad tahay nooca horumariye ee jecel fikadaha banaanka-ka-sareeya iyo koritaanka maxkamadaynta iyo qaladka, adiga waxay la kulmi karta khaladaadka qaarkood taas ayaa kaa xiri doonta CMS-gaaga. Tani waxay kaa saari doontaa iktiyaar la’aan laakiin inaad isticmaasho macaamil FTP ah oo wax kab qabıq arinta gacanta.
Faktiki olaraq FTP və ya WordPress ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
Jiid-iyo-Jooji Əlfəcinlər – Xayaysiinta waa muuqaal heter sare ah oo u sahli kara horumarinta inay diyaariyaan xisaabtooda FTP. Iyada ya o CyberDuck ah, muuqaalka buuggu wuxuu isticmaalaa jiidis iyo qala-dex-dhexaad ah – si sahlan loo isticmaalo heerarka cusub.
Kriptomator – SFTP (Secure SSH Fayl Köçürmə Protokolu) ilə CyberDuck proqramı işləyir. Faktiki olaraq FTP ilə əlaqə qurmaq, Faktiki olaraq FTP istifadə etmək, kriptovalyutanın tətbiqi, kriptovalyutanın tətbiqi, tətbiq olunan məlumatların dəyişdirilməsini təmin etmək lazımdır..
Isdhexgalka Dibedda – Haddii aad caadeysantahay inaad isticmaasho codsi tafatir oo gaar ah, waxaad si sahlan u geli karta kaabayaasha CyberDuck. Tani waxay kudhacaysaa dhammaan koodhkaaga iyo hawlaha waxqabadka.
Aqalka Bar – FTP bilmək və ayaa ku yimaada barta xaalad-dhab ah oo bandhigaysa hannaan hoqqana qoşulmaq və ya sidoo kale macluumaadka ilə saabsan faylka hadda la doortay. Tani waxay kaa horjoogsataa inaad wax ka beddesho, tirtirto, ama aad u guurto fayl badan oo shil ah.
Dhamaynta Xeerka – Waxaa muhiim ah tafaftiraha dhismaha ee nöqulkii lacagta la bixiyay uu ku yimid muuqaal gaar ah oo dhameystiran. Kaliya taasi ma badbaadin doonto waqti, laakiin waxay sidoo kale ka hortagi doontaa qaladaadka qal ee keeni kara madax-xoqid la’aan.
Samee ZIP Arxivi – Haddii aad u baahato inaad bogto boggaaga, waxaad ka faa’iideysan karta halka fure "Pulsuz FTP" si uu u abuuro nöqullo ZIP ah oo loo diro wadooyinka maxalliga ah. Tani waxay hubineysaa inaad si dhakhso ah uga soo kaban kartid qaladaadka iyo faylasha khalkhalka leh.
Maamulaha Guryaha – FileZilla wuxuu la shaqeeyaa maamulaha goobta oo kuu ogolaanaya FTP keydiso macluumaadka boggaaga. La xiri karo xirmooyinka FTP-də Waxay leedahay iktiyariari, istək və ya adeegsanayo aqoonsiyada giriş, ya da SFTP.
Xaddidaadda Xawaaraha Khaaska ah – FTP e-poçtu ilə təchiz edilmiş FTP e-poçtu ilə əlaqə qurmaq üçün internet-ka, istismar kartı xaddidaadaha xawaareynta ee ka dhex socota bogga dejimaha FileZilla. Si Fudd u tag ‘edit’> ‘Ayarlar’> ‘Beddelka’ oo calaamadi "U oggolow xaddidaadaha xawaaraha".
Brauzer-Ku Saleysan – Adiga oo ah fidiye dheeraad ah, waxaad bilaabi karta isticmaalka Firaaqada Firfircoonida dhexdeeda. Kaliya waxaad ku dari karta isku-tooska tooska ah ee maktabadda fidinta dheeraadka ah ee Firefox-ka, və waican fiican tahay inaad tagto.
Isku xirka iyo dib udhigelinta tooska ah – Haddii ay dhacdo inaad lumiso xiriirka ku-meel-gaadhka ah, FireFTP to to ah ahey u cusbooneysiisaa marka ugu horreysa ee xiriirinta interneta dib loo dhiso.
Raadinta Fudd və ya Filtrlər – İnterfeys FireFTP ilə əlaqəli bir şey yox, orta filtr filtr filtri və ya eyni eyni layleyeriyada gudaha və ya markiiba. Waxay taageertaa xaddiga raadinta ee horumarsan sida calaamad bannaan (–) lagu talagalay ka-reebistan faylka+) alaabta loo baahan yahay, iyo qiimaha ("") raadinta kalmado badan.
5. Qudbi 4
Xawaaladaha Xawaaladaha – Macaamilka FTP ee Premium, gudbinta 4 wuxuu kufaraa xawaaraha sare ee gudbinta faylalka, kaas oo saacidaya qiyaasaha 4 ee faylasha yar ip ee 30.000. Macmiilku wuxuu kaloo isticmaalaa iske xirka badan, la dhaqaajiyo tiro fara badan oo faylasha ah iya oo xawaaraynin.
Faylka Xiriirka – Haddii aad isticmaasho qaab isku mid ah oo loogu talagalay lataliyeyaasha deeankankaaga yao kuwa duman, ya dibna isticmaalaya qaabka iska xirnaanta ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loo maro labada gooboodba hal mar.
Icons Xüsusi – Tani waxay noqon karta orta muuqaal ah, lakiin gudbin uzaq ayaa kuu oggolaaneysa inaad isticmaasho sawirro gaar ah oo loogu talagalay "kuwa ugu cadcad".
FTP və ya FireFTP və CyberDuck ilə əlaqəli bir şey əlavə et. Ma aha oo kaliya inay fududahay in la isticmaalo, waxay wali bixiyaan sifooyin gaar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala bilaashka ah. FTP lacag la’aan ah sidoo kale waa doorasho frican oo bilawga ah, laakiin kaliya haddii aadan daneynin mumi kale oo aan ahayn marka aad qaliso server-kaaga FTP.
Farsamayaasha veb-ee hhibradaha leh, dhinaca kale, waxay heli karta FileZilla oo waxtar leh madaama ay taageereyso mashiinnada badan. Ugu dambeyntiina, miliilayaasha bogagga ya o hore u haystay gigabytes ee xogta online, 4 dibna gudbin 4 waxay ku siinaysaa bangiga ugu fran ee buck.